Khabiirka PDF ee Mac ayaa qiimihiisu jaray usbuucan 50% | waxaan ka imid mac
Khabiirka PDF ee Mac wuxuu jaray qiimihiisii ​​usbuucan 50%
Waxaa jira dhowr codsiyo tafatirka PDF kala duwan oo loogu talagalay Mac maanta, laakiin waa run in marka si dhow loo eego, waxaa jira tiro yar haddii wax barnaamijyo ah oo ku soo dhawaada kartida khabiirka PDF ee uu abuuray Readdle. Hadda shirkaddu waxay hoos u dhigtay qiimaha alaabteeda iyo nooca Mac 50% qiimaheeda.
Khabiirka PDF waa codsi akhris degdeg ah oo PDF ah oo loogu talagalay Mac. Waxay awood u leedahay inay furto fayl kasta oo PDF ah, mid weyn ama mid yar, waxayna had iyo jeer u muuqataa mid aan dadaal lahayn. Waxaan si joogto ah u isticmaalaa waxaanan kuu xaqiijinayaa in dhowr ilbiriqsi gudahood ay diyaar u tahay in la isticmaalo oo marka aan soo dejinno fayl, dhowaan la heli karo si loo bilaabo ka shaqeyntiisa. Mid u dambeeya.
Laakiin aniga ahaan, mid ka mid ah dhinacyada uu codsigani aad uga soocan yahay waa raadinta. Readdle wuxuu sheeganayaa in Khabiirka PDF uu la shaqeeyo qaar Astaamaha raadinta PDF ee casriga ah waana hubaa inay sidaas tahay sababtoo ah aad bay u guulaysteen oo weliba aad bay u dheereeyaan.
Waxay leedahay sifooyin kale oo badan, sida kartida wax ku sheegidda PDF-ga. Ku dar faylasha oo jiid oo kaliya. Wax ka beddel PDF foomamka Iyo dabcan awoodda lagu saxeexo dukumentiyada adoo ku daraya saxeexayada dhijitaalka ah ama gacanta lagu qoray ee aan hore u abuurnay oo go'aansanay.
Doorasho wanaagsan oo aan hadda ku heli karno qiimo dhimis 50%. Markaa waxay ka socotaa kharashka 80 euro ilaa 40 ee shatiga saddexda kombiyuutarada Mac iyo wuxuu bilaabmayaa maanta 25-ka ilaa 30-ka. Dhab ahaantii waa fursad ay tahay inaadan lumin. Haddii waxa aad raadinayso uu yahay barnaamij lagu maamulo PDF oo ku habboon baahiyahaaga. Waxay u badan tahay inay tahay tan ugu fiican qaybteeda. Had iyo jeer aad ayaan ugu faraxsanaa barnaamijka. Wixii aan ku arko faallooyinka Mac App Store, ma ihi kaligaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Khabiirka PDF ee Mac wuxuu jaray qiimihiisii ​​usbuucan 50%
24-inch iMac oo leh waqtiga kama dambaysta ah ee gaarsiinta Diseembar 28
Apple waxay u malaynaysaa MacBook Pro oo leh kiiboodhka dib loo celin karo ee ku jira shatigan